लोपउन्मुख कुँडुले घर हेर्न पाल्पा जाऔँ ! - Pokhara News
लोपउन्मुख कुँडुले घर हेर्न पाल्पा जाऔँ !
पोखरा न्यूज – २५, पुष । प्रायः मेला महोत्सवमा मात्र देख्न पाइने गाउँ समाजबाट हराउँदै गएको कुडुले घर पाल्पामा देख्न पाइन्छ । पाल्पा जिल्लाका पूर्वखोला र रम्भा गाउँपालिका, माथागढी, रैनादेवी, छहरालगायतमा साना र एउटा दुई घर देखिए पनि निस्दी गाउँपालिकामा केही बढी छन् ।
पोखरामा ‘मुनामदन’ नाटक मञ्चन हुने